Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2750 - 2751 | XperimentalHamid
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2750 - 2751
Ngamana 8, 2021 by I-Hisam Ullah
funda Isahluko 2750 - 2751 yenoveli Unyana osisigidi eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
Xa uCharlie emise imoto esangweni leClassic Mansion, uOrvel wayesele efikile.
Uthe nje ukuba afike uCharlie, wakhawleza waya kumphathi wendlu enkulu wathi ngentlonipho: "Master, ibhokisi yedayimani ikulungiselele."
UCharlie wanqwala, ekhomba uPollard ecaleni kwakhe, noMelba, ovele wehla emotweni wathi, “Orvel, mandikwazise. Lo nguNjingalwazi uPollard Watt ovela kwiYunivesithi yaseAurous Hill yezeMali nezoQoqosho. Inenekazi elisemva yintombi kaNjingalwazi Watt, Nkosazana Melba Watt. ”
UOrvel wakhawuleza waya phambili. Ngembeko wathi: “UNjingalwazi Watt kunye noNkosazana Watt, ndingu-Orvel, ndiyavuya ukudibana naba babini!”
UPollard noMelba nabo banqwale ngentlonipho ku-Orvel.
UCharlie uthe ngeli xesha: “Mnu. U-Orvel, ukuba uNjingalwazi Watt kunye no-Miss Watt bafuna uncedo e-Aurous Hill kwixesha elizayo, kufuneka ndikuphazamise ngakumbi. ”
UOrvel uthe ngaphandle kokulibazisa, “Mfundisi, ungakhathazeki. Ngala magama avela kuwe, okoko nje uNjingalwazi Watt kunye no-Miss Watt bethetha, i-Orvel ngokuqinisekileyo izakuphuma! ”
UCharlie wanqwala wathi kuye: “Qala ngokungenisa uNjingalwazi Watt noMiss Watt, ulungiselele ukutya neziselo kuqala, ndinento yokwenza kwaye ndiyaphuma, ndizakubuya kwimizuzu eli-10.”
Emva koko, wathi kuProfesa Watt: “Malume, uza kungena noMelba, ndiza kuza ithutyana.”
"Kulungile." UPollard Nodded, wathi: “Masingene ke sikulinde, ungakhathazeki endleleni.”
UCharlie wanika utata nentombi kuOrvel, wabuyela emotweni ngokukhawuleza, waqalisa imoto, wajika, wadlula kuloo mall.
Ngamava okuthenga iimpahla zangaphantsi kusasa, uCharlie uphumle kakhulu ngeli xesha. Ngokukhawuleza ukungena kwakhe evenkileni, wabuza umthengisi ngqo. Kuba iseti yakusasa yayimnyama, wathenga ingubo emnyama emnyama b3dy yedwa ngeli xesha.
Ngokumalunga nobukhulu, unikezwe ukuba umzimba wophulwe nguMelba kusasa, wongeze nje ubukhulu obabini kwaye watshintsha ukusuka ku-c.
Emva kokuthenga impahla enganxibanga, wakhawuleza wabuyela engayeki kwaye wayimisa imoto kwakhona phambi kweClassic Mansion. Xa wayeza kwehla emotweni, ngequbuliso waqonda ukuba ngekhe aye ngqo ebhokisini enengxowa, kungenjalo, wayeza kubonwa nguPollard. Xa efika, usenokucinga ukuba ungumgulukudu.
Uye wakhupha i-un3rwear ebhegini, wayisonga wayifaka epokothweni.
Nangona iipokotho zidumbile, kodwa ngethamsanqa akukho mntu unokucinga ukuba ibinesiqwenga semikhono yangaphantsi yabasetyhini.
Ngeli xesha, uPollard noMelba babehleli bencokola kwibhokisi yedayimani.
UPollard wayefuna ukwazi iinkcukacha zokuxhwilwa kwentombi yakhe eSyria, ke wabuza imibuzo emininzi.
UMelba uphendule engekho, kodwa zonke iingcinga zakhe bezimalunga ne-unwear.
Kwakuqala ukuba ahlangane nengxaki enjalo. I-un3rwear ekhutshiweyo yayixhonywe ngokugwenxa ngaphakathi kweempahla. Yaziva ingonwabanga kwaye inzima.
Ngalo mzuzu, uCharlie wavula ucango wangena.
Ukubona uCharlie, uMelba waziva ecaphuka ngakumbi.
Ayisiyo into yokuba umthiyile uCharlie, ikakhulu kungenxa yokuba uCharlie wamthengela le seti ye-un3rwear, eyamfaka engxakini.
"Le ingezantsi icace gca, kwaye ungayinyamezela ngokutshixizisa amazinyo, kodwa le ingaphezulu… heyi… izakubulala ukuthandwa!"
UCharlie naye wabona ukuba intetho kaMelba yayingaqhelekanga kwaye waqikelela ukuba kufuneka aqiniseke ngoku kwakungonwabisi. Mhlawumbi wayehlala ekhalaza ngaye, ke wacinga ngokufumana ithuba elifanelekileyo lokumnika le intsha epokothweni.
Nangona kunjalo, olu hlobo lwento akufuneki lwenziwe phambi kukaPollard, kungenjalo, kunokuba yindlela uprofesa wakudala angayiqondi kakuhle.
Ebona ukuba uCharlie uyeza, uPollard wambulisa ukuba azohlala ecaleni kwakhe.
Ibhokisi yedayimane yeNdlu eyiClassic yeyona ndawo iphambili kuyo yonke indlu. Itafile enkulu yokutya ejikelezayo inokwanelisa ubuncinci abantu abangamashumi amabini besitya ngaxeshanye, ke ijongeka ngathi iyinkqantosi xa kuhlala abantu abathathu.
Emva kokuba uCharlie ehleli ecaleni kukaPollard, uPollard wajonga kwelinye icala leMelba wathi, “Melba, sibathathu kuphela. Kutheni uhleli kude kangaka? Hlala apha.
UMelba watsho ngeentloni, “Ndizohlala apha. Nantsi itafile enkulu, kunzima ukuba abantu abathathu bahlale ecaleni komnye. ”
UPollard wanikina intloko engenakunceda, wathi, "Andinyanzelisi, kuxhomekeke kuwe." Emva koko, wabuza uCharlie, “Charlie, ungayisela ikomityi?”
UCharlie wathi ngoncumo: “Ndiyaphila, kuxhomekeke ekubeni kusafuneka uphangele emva kwemini.”
UPollard wancuma wathi: “Akukho klasi emva kwemini, ke ndiceba ukuthatha ikhefu losuku olunesiqingatha. Aba babini bazakusela iiglasi ezimbini emini, emva koko ndigoduse uMelba ndiyokuphumla kakuhle, ekugqibeleni ubuyile, andinakumshiya phantsi ndiye epakini ukuba ndibaleke. ”
UCharlie wanqwala wathi, "Inene, ulapha uMelba. Akazange ahlupheke kangangexesha elithile. Ngokwenene kufuneka aphumle kakuhle kwezi ntsuku zimbini. Ukuba kunjalo, ndiza kukukhapha ukuya kusela iiglasi ezimbini emini. Ndizakutya isidlo sangokuhlwa mvanje, uOrvel makaqhube wena noMelba sigoduke. ”
UPollard wahleka wathi: “Kulungile, masivule iiglasi ezimbalwa!” Ngalo mzuzu, u-Orvel wavula nje umnyango wabuza uCharlie: “Mfundisi, izitya ezibandayo zilungile, ndingaphaka kuqala?”
UCharlie wayexakekile. Uthe: "Yiza, iibhotile ezimbini zeMoutai ngasendleleni, ndiza kuhamba noNjingalwazi Watt ukuya kusela iiglasi ezimbini."
"Kulungile!" U-Orvel uvumile ngaphandle kokuthandabuza, wathi: “Izitya ezishushu ndizokunika ngqo ngokweenkcukacha zebhokisi yedayimane. Zonke zilungiselelwe. ”
UCharlie wawangawangisa isandla sakhe: “Sukuba nezinto ezigqithiseleyo, izitya ezikwibhokisi yakho yedayimani zezabantu abangama-20, thina sintathu kuphela. Singagqiba njani ukutya kangaka? ”
UPollard ukwangxamile wathi: “Masitye nje nantoni na oyifunayo, kodwa ungabi sisityebi kakhulu kwaye umoshe. Ngoku ilizwe liphela likhuthaza ukukhuthala kunye nokuzonwabisa. Kufuneka sisabele kwikhwelo kwaye siphelise inkunkuma. ”
UCharlie wacinga, “Malume, awufuni uye ngqo ekhitshini elingasemva ukuze ubone, ukuba unomdla, vumela umpheki awulungiselele kwangoko. Siza kwanela sobathathu, uku-odola izitya ezine kunye nesuphu enye.
UPollard ungxamile wathi, “Hayi, hayi, ndim lo. Andikhethi ngokutya. Ndingatya nantoni na oyithandayo. ”
UCharlie wancuma wathi: “Kuyinyani ukuba ndinesigulo esifanelekileyo, ngoko ndisakucela ukuba uyokujonga kwaye ukhethe izitya ezimbalwa.”
UOrvel umamele ecaleni. Edidekile, wacinga ngaphakathi: “Loluphi uhlobo lweyeza oluthengiswa kumhlavuthwa, Mfundisi? Ukuba ufuna uku-odola, ndingazisa nje imenyu? Kutheni uvumele uNjingalwazi Watt ukuba aye ekhitshini elingasemva? Intoni? Ngokubanzi, uninzi lweekhitshi ezibuyelweyo azivumelekanga ukuba zityelelwe ngabathengi, kwaye iClassic Mansion ayikaze yenze le nkqubo. ”
Kanye njengoko wayezibuza, ngequbuliso wabamba umbono wobuso obuhleli malunga noCharlie. Nangona kunjalo, uMelba, owayecimelene kancinci kwaye enentetho ebuhlungu, ngequbuliso waqonda entliziyweni yakhe.
“Kuyavela ukuba uMaster ebefuna ukuthatha uNjingalwazi Watt ahlukane naye aze ahlale yedwa nentombi yakhe…”
Ecinga ngale nto, u-Orvel ngokungxama wathi kuPollard: “UNjingalwazi Watt, ulundwendwe olubalaseleyo luka-Master. Ewe, kuya kufuneka uthathe isigqibo malunga noku-odola. ”
Emva kokuba egqibile ukuthetha, wenza isimemo ngokungqalileyo wathi ngentlonipho: “Njingalwazi, nceda uye ngasemva ekhitshini, ndizokwazisa ngezitya zethu ezikhethekileyo eClassic Mansion!”
UPollard wayeziva ukuba ukubuk 'iindwendwe kwakunzima xa wakubona oku, ke kuye kwafuneka avume kwaye wathi: "Kulungile, emva koko ndiza kuba nembeko ngakumbi kunangaphambili!"
Emva koko, uPollard no-Orvel bayishiya ibhokisi kunye.
Bathe nje bakuphuma bobabini, uCharlie wajonga eMelba wathetha enentloni: “Melba, iimpahla ezikufutshane endikuthengele zona kusasa azifanelekanga?”
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2748 - 2749
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2752 - 2753